အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 – Aprilia review, motorcycle… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home → Aprilia → First impressions of the Aprilia Dorsoduro 1200 - Aprilia ပြန်လည်သုံးသပ်, motorcycle...
19 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | Comments Off on အဆိုပါ Aprilia Dorsoduro ၏ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ 1200 – Aprilia ပြန်လည်သုံးသပ်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
The Buell XB12x (known as the Ulysses,aterrible name) isagreat bike but something new had to be on the horizon and there is not exactlyamassive rangevin the market for large super motard style bikes. There is the Ducati Hypermotard 1100. there isathe KTM Super Duke 990R (moreanaked streetfighter), အဆိုပါ KTM 990 Supermoto and until now not really much else. They are all great bikes in their own rights but for one reason or another haven’t grabbed me.
2013 Aprilia RSV4ABS Factory- ပထမဦးဆုံးအစီးနင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း- ဓာတ်ပုံများ
19.06.2015 | Comments Off on Aprilia Tuono V4 R ကို APRC အပေါ်လျင်မြန်စွာစီး – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးစဉ်သတင်းများ – မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Aprilia Mana 850 ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Bajaj Discover Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စက်ဘီး Kawasaki ER-6n အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic စမတ် eScooter ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး AN 650 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Brammo Enertia Ducati Diavel ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Ducati Desmosedici GP11 Ducati 60 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ DN-01